Malcolm McDowell napetraka tamin'ny kintana Indie Horror 'Ilay mpanasoa' - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Malcolm McDowell dia milalao kintana ao amin'ny horonantsary Indie 'Ilay mpanasoa'
Malcolm McDowell dia milalao kintana ao amin'ny horonantsary Indie 'Ilay mpanasoa'
by Waylon Jordan Septambra 14, 2020
nosoratan'i Waylon Jordan Septambra 14, 2020
Malcolm McDowell no hitarika ny sarimihetsika horonantsary indie vaovao avy amin'ny talen'ny mpamokatra ary David Carson. Niara-niasa izy roa teo aloha Star Trek: Taranaka.
Taorian'ny fahafatesan'ny vadiny, mpanao hosodoko malaza taloha (McDowell) dia monina amin'ny zavakanto. Tsy ela anefa dia matahotra izy fa manenjika ny trano ary mieritreritra ny hitarika azy ho adala ireo fanahy ireo.
McDowell dia veterana raha ny momba ny fanaovana sarimihetsika karazana. Ny mpilalao anglisy dia niseho tamina karazana fampihetseham-po, chillers, ary slashers tamin'ny asany lava be sy malaza A Clockwork Orange, Rob Zombie's Halloween, Fotoana aorian'ny fotoana, ary Firestarter 2: Nohavaozina indray izay nitana ny toeran'i John Rainbird izay lalaovin'i George C. Scott teo aloha. Ho hita eo amin'ny andiany Amazon ho avy ihany koa ilay mpilalao Ireo mikatsaka fahamarinana miaraka amin'i Nick Frost sy Simon Pegg.
Carson dia nitazona ny fahitalavitra tamin'ny andian-tantara toa azy Smallville, Ny Fanjakana faha-10, ary Files Dresden miaraka amin'ny fivoahana tsindraindray eo amin'ny efijery lehibe. Ny sarimihetsika farany nataony dia ny taona 2004 sakanana.
Tsy mbola misy teny momba ny fandaharam-potoanan'ny horonantsary, ny daty famoahana, na ny fandefasana bebe kokoa ny Ilay Mpanasoa, fa iHorror kosa dia hitazona anao amin'ny antsipiriany rehetra rehefa misy izy ireo.
Faly ve ianao mahita an'i Malcolm McDowell manao horonantsary mahatsiravina vaovao? Ampahafantaro anay ny hevitrao amin'ny hevitra etsy ambany!
David carsonMalcolm McDowellIlay MpanasoaWaylon Jordan
Zombie Safari dia mamela anao hitifitra Paintball amin'ny tsy maty avy amin'ny fiara mifono vy
Mampihomehy ny Fitiavan'i Halloween dia mampiseho fa tsy nofoanana ny vanim-potoana